Wosom Onyankopɔn Biako anaasԑ Anyame bebree? – 4Mormon (Mormonfo)
Wosom Onyankopɔn Biako anaasԑ Anyame bebree?
“Mԑka Anyame ahorow no nyinaa….Maka no mmere nyinaa sԑ Onyankopɔn yԑ Soronko ԑnna Yesu Kristo no yԑ soronko a ɔne Onyankopɔn ntam atetew, ԑnna afei nso Honhom Kronkron yԑ soronko: na eyi miԑnsa gu ahorow abiԑsa ne Anyame Abiԑsa”-Odiyifo Yosef Smith Nkyerԑkyerԑ kr. 370
Onyankopɔn bԑn na wosom? Agya no anaasԑ Ɔba no?
“Yԑsom Agya no….Nanso nea a ɔsom sԑ no titiriw ne Onyankopɔn mmeresanten Agya no yԑ nea ɔda nsow na ne nkutoo na ɔkorɔn. Wɔhyԑԑ yԑn sԑ yԑnsom No, ɔno nkutoo”-Come Unto Christ-Melchizedek Priesthood Personal Study Guide page 46-49
Onyankopɔn bԑn na wɔ Mormon Nhoma mu no Nefatefo no som?
Onyankopɔn Ba no sԑ odi akɔneaba….bio nso mihuu sԑ bebree kotowee wɔn nan ase som No….Esiane sԑ ɔkwan pa no ne sԑ wobegye Kristo adi….ԑsԑ sԑ wobu nkotodwe wɔ N’anim na wofi wo nipadua nyinaa mu som No…”1 Nephi 11:24, 2 Nephi 25:29
Hena na wɔ Bible mu no Yesu Akyidifo no somee no?
“Na bere a wohuu No no, wɔsomee No….”-Mateo 28:17
So wosom Yosef Smith Anyame anaasԑ Bible Nyankopɔn no?
Afei Zeezrom kae sԑ: so yԑwɔ Onyankopɔn a ԑboro biako? Na obuae sԑ Dabi”-Alma 11:28-29 BM
“So Onyankopɔn bi ka Me ho? Wiԑ, Onyankopɔn Biara nni hɔ: Minnim Bi”-Yesaia 44:8 KJV Bible
← So Wobɔ Mpae ma Yesu?
So Onyankopɔn yԑ Onipa a Ɔkorɔn? →